Home » Lahatsoratra farany farany » Hotels & Resorts » Sandals Royal Curaçao dia vaovao tsara ho an'ny fizahan-tany Curacao
Karaiba • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • Tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Dos Awa, Sandal Resorts 'dobo tsy manam-petra miaraka amin'ny gorodona ambony sy ambany midadasika mety ho talanjona amin'ny fomba mahatalanjona.
Sandals Resorts International (SRI) dia namoaka antsipirihany vaovao momba ny fivahinianana marika faha-16 efa nandrasana fatratra ary ny fidirana voalohany nataon'ny orinasa tao Curaçao, ilay Sandals Royal Curaçao vao nantsoina.
Fanambarana lehibe ho avy ny alarobia aogositra ho an'izay mieritreritra ny hanao fialan-tsasatra an-tampon'ny mpanjaka any Curacao miaraka amina fihodinan'ny Jamaikana.
Nanomboka ny Andro Noely izy rehetra tamin'ny taon-dasa Sandals Resort dia nanambara ny fanitarana azy any amin'ny nosy Caribbean Caribbean Curacao - miaraka amina fihodinan'ny Jamaika.
Sandals Curaçao dia hitondra ny fanavaozana faran'izay betsaka any amin'ny nosy, izay nanjary mitovy dika amin'ny marika Sandals Resorts malaza eran'izao tontolo izao manerana ny faritra.
Sandals Royal Curaçao dia mipetraka amina fiarovana 3,000 hektara arovana.
Curaçao, nosy Karaiba holandey, dia fantatry ny morontsiraka tafatsofoka ao anaty vala ary ireo vatoharan-dranomasina mivelatra manan-karena amin'ny fiainana an-dranomasina. Ny renivohitra Willemstad dia manana maritrano kolonialy miloko pastel, tetezana Queen Emma Bridge, ary ilay Synagoga Mikvé Israel-Emanuel tamin'ny taonjato faha-17. Izy io koa dia vavahady mankamin'ny morontsiraka andrefana toa an'i Blue Bay, tranonkala antsitrika malaza.
Mpanorina sy filoham-pirenenan'ireo sandaly farany, ny Hon. Gordon "Butch" Stewart dia nanana vina hanovana ny Nosy Curacao ary nandeha niaraka tamin'ny zanany lahy, lefitra lefitra Adam Stewart tamin'ny volana desambra nanao ity fanambarana ity;
"Fahafinaretanay manokana ny niara-niasa tamin'ny governemanta Curaçao sy ny fianakaviana Smeets tamin'ity ezaka vaovao nampientana ny marika Sandals ity," hoy i Gordon "Butch" Stewart. "Tianay ny maneho fisaorana indrindra an'i Roald Smeets, izay nanampy betsaka tamin'ity fizotrany ity ary nahafaly azy tokoa ny niara-niasa taminy. Mikasa ny hanao mihoatra ny anjaranay izahay mba hampiakarana izao tontolo izao ny fankasitrahana ity firenena tsara tarehy ity. ”
Miorina amin'ny 44 hektara ao amin'ny fananana manokana an'i Santa Barbara, fiarovana iray mirefy 3,000 14 hektara manokana, Sandals Royal Curaçao dia hampifangaro ireo zava-mahatalanjona eo amin'ny tontolo voajanahary - tany efitra, ranomasina, tendrombohitra ary morontsiraka - miaraka amin'ny traikefa iainana. Nampandrenesina fa hanokatra varavarana ny Royal Resort amin'ny 2022 aprily XNUMX
Tamin'ny Alarobia 4 Aogositra 2021Sandals dia nanao fanambarana fa azo atao izao ny famandrihana ary miaraka amina fandrisihana $ 1000.
Tsindrio eto raha hanao fanambarana feno.
IMEX America: Tsara ny miverina!
Manangana trano klioba manokana ho an'ny...
Niverina ny Brits! Sidina 16 isan-kerinandro eo anelanelan'ny UK...
Noely matso lasa hetsika faobe tao amin'ny...
IMEX America no hetsika iraisam-pirenena voalohany nanokatra...